Jeekob Zuumaa: Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraa albamii sirbaa gadhiisuufi - BBC News Afaan Oromoo
Jeekob Zuumaa: Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa duraa albamii sirbaa gadhiisuufi
Goodayyaa suuraa Sirbi Jeekob Zuumaa inni beekaman kan mormii appaartaayid 'Umshini Wami' jedhamu hiikisaa "Qawweee Maashiiniikoo Naafida" ta'edha.
Pireziidaantiin Afrikaa Kibbaa duraa Jeekob Zuumaa erga waligaltee albamii sirbaa hin eegamne mallatteesse, rakkoo falmii siyaasaa haaraa keessa galeera.
Bulchiinsi 'eThekwini' sirboota mormii isaa maallaqaan tumsuuf waliigaleera. Kunis hambaa aadaa tursuuf ni gargaara jechuun aangaa'onni dubbataniiru.
Paartiin mormituu Afriikaa Kibbaa 'Democratic Alliance' (DA) garuu, kun qabeenyaa uummataa balleessuudha jechuun qeeqera.
Hogganaan paartii DA naannicha 'Zwakele Mncwango', qarshiin mootummaa naannichaa dargaggoota karaa muuziqaan hojii barbaadachuutti jiraan gargaaru irra ooluu qaba jechuun mormaniiru.
Raamaapoosaan maallaqa duula na filadhaa deebisuuf
Saamicha Afriikaa Kibbaatti lammilee alaarratti raawwate suuraan
Naannoo KwaZulu-Natal keessatti kan argamuu bulchiinsi 'eThekwini' bakka jireenya Obbo Zuumaafi lafa deeggartoonni isaa hedduun itti argamanidha.
Hogganaan Paarkii fi Aadaa eThekwini, Thembinkosi Ngcobo kuusama sirboota mormiifi warraaqsaa durii argachuu erga dhabanii booda Obbo Zuumaa waliin walii galtee uumuuf akka dameen isaani yaada dhiyeesse ibsaniiru.
Obbo Zuumaa sirboota kana yeroo baayyee ni sirba ture.
"Aadaafi harmaa beeksisuu irratti waliigallaa. Rakkoon keenya utuu artiistoonni hedduu gargaarsa barbaadanii, piresdaantii duraa industirii muziqaa keessatti carraa isaa yaaluu barbaadu irraatti qarshiin yeroo baduudha," jechuun midiyaa biyyiitti eNCA waliin dubbateera.
Jeekob Zuumaa Guurandhala 2018 paartiisaa 'African National Congress'n (ANC) kan aangoorra buufame. Daldala meeshalee waraanaa bara 1990n walqabatee himaannaan malaammaltummaa hedduu itti dhiyaateera. Inni garuu yakkaa hin goone jechuun haaleera.
Yaadannoo rogeessa farra-gudeeddii lammii Afrikaa Kibbaa of ajjeefte
Afriikaa Kibbaa: Saamicha manneen daldalaa lammiilee biyyoota biraa irratti xiyyeefate
Barattoonni Afrikaa Kibbaa xuubii fincaan namaarraa kalaqan